ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ (Convocation Hall ) အပွငျဖကျကို ‌ ‌ဘာ့ကွောငျ့ ဆေးမသုတျ ကွတာလဲ? – Shwe Nay Chi
(နောကျထပျလညျး မစမျးသပျသငျ့‌ပေ) ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ဆေးမသုတျ ပဲ မူလအတိုငျးထားရှိသော ရနျကုနျတက်ကသိုလျ (Convocation Hall )သညျ ပို၍တညျငွိမျ ရငျ့ကကျြ ခနျ့ငွားမူရှိသော သဘောကို ဆောငျ‌နသေညျဟု ထငျမွငျမိပါသညျ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ (Convocation Hall ) အပြင်ဖက်ကို ‌ ‌ဘာ့ကြောင့် ဆေးမသုတ် ကြတာလဲ?
၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် ပထမတခါဆေးသုတ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်7July တွင် ကျောင်းသားအရေးအခင်းဖြစ် ပြီး၊ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Rangoon University Student Union (RUSU) အဆောက်အဦးကိုလည်း ဖျက်စီးပစ်ခဲ့၍ ကျောင်းသားအများအပြားကြွေလွင့်ခဲ့ရသည်။
ထိုနောက် ၁၃ နှစ်အကြာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ထပ်၍ ဆေးသုတ်ခဲ့သည်။ ထိုအကြိမ်တွင် ဦးသန့် အရေးအခင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများ ဖိတ်ဆင်ခဲ့ပြီး လူထုအုံကြွမူတခု ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။
ထိုနောက် မယုံတဝက်ယုံတဝက်နှင့်တိုက်ဆိုင်မူ တခုသာ သဘောထားပြီး နောက်ထပ် ၁၃ နှစ်အကြာ ၁၉၈၈ ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် တတိယအကြိမ်ဆေးထပ်သုတ်ခဲ့ ကြသည်။
သို့ပေမယ့် နှစ်ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပျက်ခြင်းကို တိုက်ဆိုင်မူ ဟု ခေါ်သော်ငြားလည်း သုံးကြိမ်မြောက် သွေးထွက်သံယို နှင့် ရှေးကအဖြစ်အပျက်နည်းတူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကို ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲခြင်းကို တော့ လက်မခံ၍ မရတောပေ။
ထိုအချိန်မှစတင်ကာ ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ မှ လွဲ၍ ကျောင်းတဝန်းလုံးရှိ အဆောက်အဦးမှန်သမျှကိုသာ ဆေးသုတ်ခြင်းများသာ ပြုလုပ်ကြတော့သည်။
(နောက်ထပ်လည်း မစမ်းသပ်သင့်‌ပေ) ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးမသုတ် ပဲ မူလအတိုင်းထားရှိသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (Convocation Hall )သည် ပို၍တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် ခန့်ငြားမူရှိသော သဘောကို ဆောင်‌နေသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ထို့အတူ ဆေးသုတ်ခြင်း မသုတ်ခြင်းထက် အနာဂတ်ရဲ့ အားကိုးရမည့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို အမြဲတန်းထာဝရ မွေးထုတ်ပေးနေမှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပါတော့သည်။